'Bekungasasali naneyodwa pho ezinganeni zami?' - Ilanga News
Home Izindaba ‘Bekungasasali naneyodwa pho ezinganeni zami?’
Kubalisa uyise wezingane ezine eziwelwe wudonga
UVUKWE wumunyu wahluleka ukuzibamba, wasidinda isililo owesifazane wasePhola, eMzinyathi okushone amalungu omndeni wakhe angu-10, ngesikhathi elandisa uMengameli Cyril Ramaphosa, nabaholi abehlukene izolo ngoLwesithathu ngendlela abashone ngayo. Lokhu kwenzeke ngoMsombuluko ebusuku ngesikhathi kuhlasela izimvula ezinamandla ezishiye kukhalwa KwaZulu-Natal, njengoba sebebalelwa ngaphezu kuka-250 abantu abashone kule nhlekelele. UNkz Nonkululeko Mdlalose, uthe uthole ngomakhelwane ngalesi sigameko angakwazi nokusichaza esehlele umndeni wakhe, ugugulwa ngamanzi ungaphakathi endlini, wahamba nomfula. Uthe abashonile ngudadewabo omdala uNkz Silindile Mdlalose, izingane zakhe uThobela noKholeka nabazukulu uLusanda, u-Uyanda, uZiyanda, uLulama, uManelisi, u-Asanele noLubanzi, bonke abebebiza isibongo sakwaMdlalose.
Echaza, uthe akusalanga lutho njengoba umuzi abebehlala kuwona kusale izitebhisi kuphela, okubonakala ukuthi bekukhona umuzi kule ndawo. UNkz Mdlalose, uthe lesi sigameko senzeke ngoMsombuluko kusihlwa, kusukela lapho kusatholakale abane kuphela njengoba besaqhubeka nokuthungatha abanye abayisithupha. “Usibona sigcwele udaka nje sibheka izidumbu zabangakatholakali kusukela izolo ekuseni, sibuhlungu ngalesi sigameko njengoba singazi sizothathani sihlanganise nani kulesi simo,” esho. Uthe amalungu omndeni wakhe
abesehlale kule ndawo kusukela ngo-2009. Umengameli ufice uNkz Mdlalose, namanye amalungu omphakathi bematasa, bethungatha amanye amalungu awo.
Sekuyindaba eculwayo ukuthi izimvula zishiye kukhalwa ezindaweni ezahlukene KwaZulu- Natal. Ngakolunye uhlangothi, uMnu Mmeli Sokhela, ohlala eZimangweni, eClermont naye ubekhihla isililo ngokushonelwa yizingane zakhe ezine eziwelwe wudonga, zavaleleka ngaphakathi endlini. “Bekungasasali noma eyodwa ezinganeni zami,” kusho yena ebamba izinyembezi njengoba naye ebevakashelwe umengameli nabaholi abahlukene. Izingane zakhe ezishonile ngu- Nhlanhla Mkhize (28), uLuyanda (16), uSandile (14) no-Olwethu (12) bonke ababiza isibongo sakwaSokhela.
Uthe ngoMsombuluko basheshe bahlukana nezingane ziyolala njengoba bezilala zodwa kwelinye igumbi naye elala kwelinye. “Ugesi ubungekho, sasheshe sahlukana. Kuthe ngingakazumeki ngezwa ngomsindo omkhulu ngathi ngiyazama ukuphuma kanti nami bese ngivalelekile. Ngizamile ukuthinta abafowethu namaphoyisa kodwa ngenxa yokuthi nemigwaqo ibisivalekile, kwabanzima ukuba beze kimi. “Bakhona omakhelwane abakwazile ukufika ngakwazi ukuphuma mina kodwa kwaba yinkinga ukukhipha izingane,” kuchaza uMnu Sokhela.
Uthe izingane zize zatakulwa ngoLwesibili ekuseni ngenxa yobunzima bokuvaleleka kwazo.
Umndeni wakwaGwala utshele umengameli ukuthi namanje usashaqekile ngokumuka kukagogo wabo uNkk Jabu Gwala (69), eNdunduma khona eClermont, njengoba ewelwe yindlu wabe esemuka nomfula njengoba bakhe osebeni lomfula. Umengameli Ramaphosa obehambisana
nongqongqoshe kuzwelonke owezoHulumeni baseKhaya nobuHoli beNdabuko uDkt Nkosazana Dlamini Zuma, oweHhovisi likaMengameli uMnu Mondli Gungubele, uNdunankulu waKwa- Zulu-Natal, uMnu Sihle Zikalala nongqongqoshe besifundazwe bathembise ukubambisana nemindeni
ehlukumezekile ngenhloso yokuthola
usizo ngezindlela ezahlukene.
Previous articleKUSHONE IZINGANE ZANDAWONYE ZIWELISANA EMFULENI OYINGOZI
Next articleYELULA ISANDLA INYUNYANA KWABALAHLEKELWE